Izizathu ezithandathu zokuguqula ubuKristu
Izizathu Ezinkulu zokuguqula ubuKristu
Izizathu zokuguqula ubuKristu
Kwiminyaka engaphezu kwe-30 ukususela ekubeni ndinikela ubomi bam kuKristu, kwaye ndinokuxelela, ubomi bobuKristu akulula, 'luvakale' indlela. Ayifikanga neepakethi zokufumana iziqinisekiso ezilungiselelwe ukulungisa zonke iingxaki zakho, ubuncinci kungekho kwicala lamazulu. Kodwa andinakuyithengisa ngoku nangayiphi na enye indlela. Izibonelelo ezigqithiseleyo kunzima. Kodwa, isizathu esona sizathu sokuba ngumKristu , okanye njengokuba abanye bathi, ukuguqula ubuKrestu, kuba ukholelwa ngentliziyo yakho yonke ukuba uThixo ukhona, ukuba iLizwi lakhe-iBhayibhile-liyinyaniso, kwaye uYesu Kristu Uthi uthi: "Ndiyindlela kunye nenyaniso nobomi." (Yohane 14: 6 NIV )
Ukuba ngumKristu akusayi kwenza lula ubomi bakho. Ukuba ucinga ukuba kunjalo, ndincoma ukuba ukhangele kule miqondo engafanelekanga ngokuphila kobuKristu . Inokwenzeka ukuba, awuyi kuba nemimangaliso yokwahlula ulwandle yonke imihla. Sekunjalo iBhayibhile ibonisa izizathu ezinokuqiniseka ukuba ngumKristu. Nazi izinto ezithintekayo zokuphila ezi-6 ezifanele ukucinga njengesizathu sokuguqula ubuKristu.
Fumana i-Greatest of Loves:
Akukho mboniso omkhulu wokuzinikela, akukho mnikelo omkhulu wothando, kunokuba ubeke ubomi bakho ngomnye. U Yohane 10:11 uthi, "Uthando olukhulu alukho ngaphezu kwalokhu, ukuba ulala ubomi bakhe ngenxa yabahlobo bakhe." (NIV) Ukholo lobuKristu lwakhiwe kulolu hlobo lwenthando. UYesu wanikela ubomi bakhe ngenxa yethu: "UThixo ubonakalisa uthando lwakhe ngathi: Ngethuba sasibe ngaboni, uKristu wasifela." (KwabaseRoma 5: 8 NIV ).
KuyabaseRoma 8: 35-39 sibona ukuba xa sithe sabona uthando lukaKristu olungenamthetho, akukho nto ingasahlukanisa nayo.
Kwaye njengokuba simkela ngokuzithandela uthando lukaKristu, njengabalandeli bakhe, sifunda ukuthanda njengaye kwaye sisasaza abanye uthando.
Funda indlela yokuba ngumKristu uze ufumane uthando lukaThixo
Funda ngakumbi malunga nokuba kutheni uYesu efela kuthi
Ngokungafani nokwazi ulwalamano lukaThixo, akukho nto ifanisa nenkululeko umntwana kaThixo ayenayo xa ekhululwa ebukhulu, enetyala kunye neentloni ezibangelwa sisono.
KwabaseRoma 8: 2 uthi, "Ngenxa yokuba ungowakhe, amandla oMoya onika ubomi akhululwe ngamandla esono eholela ekufeni." (NLT) Ngethuba losindiso, izono zethu zixolelwe, okanye "zihlanjwe." Njengoko sifunda iLizwi likaThixo size sivumele uMoya wakhe oyiNgcwele ukuba asebenze ezintliziyweni zethu, siyazikhulula ngokukhululeka kwisono.
Akunjalo nje kuphela esinokufumana inkululeko ngokuxolelwa kwesono , kunye nenkululeko kwisono lesono phezu kwethu, siqala nokufunda ukuxolela abanye . Njengoko siyeke ukuhamba, umsindo kunye nentukuthelo, iintambo ezisisithabathayo ziphulwe ngokwezenzo zethu zokuxolela. Ngokucacileyo, uYohane 8:36 uyichaza ngale ndlela, "Ngoko ukuba uNyana uyakukhulula, uya kukhululeka ngokwenene." (NIV)
Funda okuthethwa yiBhayibhile malunga nokuxolelwa
Uvuyo Oluvuyoleyo Noxolo:
Inkululeko esiyifumana kuKristu iyazala ngokuvuyisa ngonaphakade. I-1 Petros 1: 8-9 ithi, "Nangona ungamboni, uyamthanda; kwaye nangona ungamboni ngoku, uyakholelwa kuye kwaye uzaliswa luvuyo olungenakuhlaziywa kwaye luzukileyo, kuba ufumana Injongo yokholo lwakho, usindiso lwemiphefumlo yakho. " (NIV)
Xa sibona uthando lukaThixo kunye nokuxolelwa kwakhe, uKrestu uya kuba sisiko lovuyo lwethu.
Akubonakali kunokwenzeka, kodwa nangaphakathi kwezilingo ezinkulu, uvuyo lweNkosi luxhuma ngaphakathi ngaphakathi kwaye uxolo lwakhe luhlala phezu kwethu: "Yaye uxolo lukaThixo, olugqithise konke ukuqonda, luya kugcina iintliziyo zakho kunye ingqondo kuKristu Yesu. " (Filipi 4: 7 NIV )
Funda ngakumbi malunga novuyo kuKristu
UThixo wathumela uYesu, uNyana wakhe oyedwa, ukuze sibe nobuhlobo naye . 1Yohane 4: 9 ithi, "Ngulo ndlela uThixo abonisa ngayo uthando phakathi kwethu: Wathumela uNyana wakhe oyedwa yedwa ehlabathini ukuze siphile ngaye." (NIV) UThixo ufuna ukudibana nathi ngobuhlobo obusondeleyo. Uhlala ebomini bethu, ukuba asithuthuzele, asincede, ukuphulaphula nokufundisa. Uthetha nathi ngeLizwi lakhe, usikhokela ngoMoya wakhe. UYesu ufuna ukuba ngumhlobo wethu osondeleyo.
Funda ngakumbi malunga nendlela yokwakha ubuhlobo obusondeleyo noYesu
Funda indlela yokuchitha ixesha kunye noThixo
Ukufumana Iinjongo Zakho Eyona Nenjongo Nenjongo:
Sadalwa nguThixo noThixo. Kwabase-Efese 2:10 kuthi, "Kuba singumsebenzi kaThixo, wadalwa kuKristu Yesu ukwenza imisebenzi emihle, leyo uThixo ayilungiselele kwangaphambili ukuba senze." (NIV) Sasidalwe ukunqula. ULouie Giglio , encwadini yakhe ethi The Air I Breathe , ubhala esithi, "Unqulo lunomsebenzi womphefumlo womntu." Ukukhala okukhulu kweentliziyo zethu kukumazi uThixo. Njengoko sihlakulela ulwalamano lwethu noThixo, uyasitshintsha ngoMoya oyingcwele kumntu esiye wadalwa ukuba abe. Kwaye njengoko sitshintshwe ngeLizwi lakhe, siqala ukusebenzisa nokuphuhlisa izipho uThixo azibeke ngaphakathi kwethu. Sifumana inzaliseko yethu epheleleyo kunye nenyaniso yokwaneliseka ngokomoya njengoko sihamba ngeenjongo kunye nezicwangciso uThixo awazenzile yona kuphela, kodwa wasilungiselela. Akukho mfezekiso wehlabathi othelekisa nakumava.
Funda ngakumbi malunga nenjongo yobomi bakho
Ukufumana ngonaphakade noThixo:
Enye yeendima endithanda kakhulu eBhayibhileni, iNtshumayeli 3:11 ithi uThixo "ubeke ngonaphakade ezintliziyweni zabantu." Ndiyakholwa yile sizathu esenza sibe nomnqweno ongaphakathi, okanye ukungabi nalutho, de kube kuthi umoya wethu uphile kuKristu. Ngoko, njengabantwana bakaThixo, sithola ubomi obungunaphakade njengesipho (kwabaseRoma 6:23). Ubomi obungunaphakade noThixo buya kudlulela kunoma yiyiphi into elindelekileyo emhlabeni ukuba siqale ukucinga ngezulu: "Akukho lihlo liye labona, akukho ndlebe eyivile, kwaye akukho nto icinga ukuba uThixo ulungiselele abo bamthandayo." (1 Korinte 2: 9 NLT )
Funda Okuthethwa YiBhayibhile Ngomso
Iyintoni Isicwangciso sikaThixo Sokusindiswa?
Indlela Yokunikela Ngemihla ngemihla
Yintoni eyenza iNcwadi Efanelekileyo yoNcomelo?
Uthando Olona Likhulu Kunabo Bonke
AmaKristu amantombazana amantombazana
Indlela yokudweba iNtloko yeHarada
I-Linearbandkeramik Inkcubeko - i-European Farming Innovators
Unokutshintsha iiMida ukusuka kwi-Undergrad ukuya kwiGrey?
Ibhola 101 - Inkundla yebhola